Nanamafy izy fa fotoana izao hikarohana fepetra entina hisorohana ny taona fotsy. Fomba iray dia ny fanemorana ireo fanadinana maro samihafa. “Ray aman-dreny sy mpianatra amin` izao dia miahiahy mahakasika izany. Tsy misy hatreto no afaka mamaritra ny fotoana hamaranana ny fihibohana ka ilaina no mampitony azy ireo. Ny fanemorana ireo fanadianana no vahaolana tsara indrindra” hoy ity minisitra teo aloha ity. Ankatoaviny kosa ireo fepetra noraisin` ny minsteran` ny fanabeazam-pirenena amin` izao. “Hevitra tsara ireo fandaharana manokana momba ny fampianarana alefa amin` ny haino aman-jery. Mila kosa paikady ahafahan` ireo ankizy mifehy ity fomba fampianarana vaovao ity mba hisy ny fanohizana ny fampianarana. Tsy afaka manolo ny fampianarana an-dakilasy mantsy ny lesona amin` ny haino aman-jery ka mila mikaroka fepetra ho amin` ny fidirana manokana”hoy ihany izy.